မြန်မာပြည်ကြီးသား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြန်မာပြည်ကြီးသား
Posted by goldenhawk on Aug 31, 2011 in Critic, Drama, Essays.. | 26 comments
ကျွန်တော် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းရှိစဉ် (၁၉၅၂)ခုနှစ်ထုတ် ပြစ်မှုသို့မဟုတ်မှုခင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ရီစရာ ဟာသတော့မဟုတ်ပေမဲ့ မှတ်သားစရာ ကောင်းတော့ကောင်းသောကြောင့် မှတ်မိသလောက်ထပ်ဆင့်တင်ပြချင်ပါတယ်၊
ရွာတစ်ရွာရဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာငယ်စဉ်ကထဲက အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်လာခဲ့တာ ၀ါ(၃၀)တောင် ရခဲ့လို့တန်ခိုးကြီး နာမည်ကျော်ကြားခဲ့လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများကပင် လာရောက်ကြည်ညို ကိုယ်းကွယ်ကြရတယ်၊ ထိုဘုန်းကြီး ၏နေ့စဉ်ဆွမ်းဖုန်း အတွက်၎င်းရွာမှ ဘာသာတရားကိုအလွန်တရာ ကိုင်းရှိုင်းသော အပျိုကြီးတစ်ဦးသည် နေ့စဉ်ကုသိုလ်ယူ ဆွမ်းပို့လေ့ရှိပါတယ်
တနေ့သောဥပုဒ်နေ့မှာ သူမဟာအာရုံဆွမ်းကပ်မည်ဆိုပြီး ဆွမ်းအမယ်စုံပြင်ဆင်ပြီး ခံတောင်းထဲထည့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အစောကြီးထခေါင်းရွက်သွားတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲရောက်တော့ ဘုန်းကြီးကလည်း အဆင်သင့်ဘဲ ခါတိုင်းလိုဘဲ ဘုရာစဉ်အောက်မှာ တင်ပလင်ထိုင်စောင့်နေတာပေါ့ ဘုန်းကြီးရှေ့ရောက်တော့ အပျိုကြီးဆွမ်းတောင်းကိုချမယ် ဆိုပြီးခေါင်းပေါ်မှ ဆွမ်းတောင်းလှန်းအကိုင် ဒူကလေးအသာညွန့်ပြီး အရှေ့တလှမ်းအလှန်းမှာ သူမရဲ့ထမီစကို နင်းမိပြီး ထမီကွင်းလုံးကို ကျွတ်သွားတော့သူမရဲ့လက်တစ်ဖက်နှင့် ထမီအပေါ်စကိုလှမ်းဆွဲရင်လဲ ဆွမ်းတောင်းမှောက်ကျသွားမည်စိုးသဖြင့် သူမ၏အတွင်းပစ္စည်းကို ဘုန်းကြီးကို လှစ်ပြသလိုဖြစ်သွားသည့် အပြင်ဘုန်းကြီးလည်း မမြင်သင့် မမြင်အပ်မမြင်ဖူးသာအရာကို မြင်လိုက်ရတော့ ဓါတ်လိုက်သလိုလို ၊သွေးတက်သလို ခံစားမှုတွေကိုခံစားနေရသည်မှ သတိဝင်လာကာ၊ထမီကိုကိုင်ပြီး ၀တ်ပေးရင်လည်း ကံသင့်မည်သူ၏ သင်္ကံန်းနှင့် ပါတ်ပေးရင်လည်း ၀ဋ်ကြီးမည်ဖြစ်သဖြင့် တကာမအား (ဟဲ့တကာမထိုင်လိုက်၊ထိုင်လိုက်) ဆိုပြီး ထိုင်ခိုင်းတယ် တကာမကလည်း ဘုန်းကြီးပြောသည့် အတိုင်းထိုင်ချလိုက်တယ် အဲ့ဒီထိုင်ချလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကို ဘုန်းကြီးက မြင်လိုက်ရတော့ ဘုန်းကြီးခမြာ ဗိုလ့်အားမြင့်တဲ့ ဓါတ်နှင့်အတို့ခံရသလိုရှိပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလဲဖိန်းရှိန်းဖြစ်ပြီး အသံတွေလဲကတုန်ကရင်တွေဖြစ်ကာ၊ တကာမကိုပြန်ထခိုင်းလိုက်၊ ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်နှင့် နောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီး ကိုယ်တိုင်မနေသာတော့ဘဲ တကာမရွက်ထားသော ဆွမ်းတောင်းကိုချလိုက်ရော ဘုရားစဉ် ကဖယာင်းတိုင်မီးလည်း လူသူတိတ်ဆိတ်သော အာရုံဦးအချိန်မှာငြိမ်းသွားခဲ့တော့ လောကလုံးဟာ ခေတ္တမှောင်မှိုက်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့
ရောင်ချည်ဦးလေးဝင်လာတဲ့အခါ မှာတော့ဘုန်းကြီးခမျာ သတိရလာပြီးသူ့ဘေးမှာ လျောင်းနေတဲ့တကာမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အစထမီဘဲကျွတ်နေတဲ့ ဒကာမဟာ ယခုတော့တကိုယ်လုံး ဘာမှမရှိတော့တွေ့ရတော့မှ သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်မိတဲအခါ သူ့ကိုယ်မှသင်္ကံန်းဟာလဲ သူ့ချေရင်းအောက်မှာပင် ဒကာမ၏ ထမီဖြင့်လုံးထွေးနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ သူ၏နှုတ်မှ (ဗုဒ္ဓေါ) သာရွတ်နိုင်ပြီး ၊နောင်တကြီးစွာဖြင့် ချုံးချငိုကြွေးကာ အမှောင့်တကာ အမှောင်မှိုက်ဆုံးဖြစ်သော ကာမ
ကိလေသာတဏာ အမှောင်မှိုက်ထဲကျရောက်သွားခဲ့ရခြင်း ကိုခွင့်လွတ်ပါရန် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏ ခြေတော်ရင်းမှာ လက်နှစ်ဖြာ ရှက်ပြီး ဦးထိပ်မိုးကာ နောင်တကြီးစွာဖြင့် ၀န်ချကတော့တောင်းပန်ရှာပါတယ်
၊နောက်ရက်မှာဘဲ ရွာမှရွာသူကြီး၊ ရပ်ရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ယူကာ မြို့တက်ပြီး ဂါတ်တဲကိုသွားအမှုဖွင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဂါတ်ဗိုလ်ကလည်း လူထွက်မလားမေးတော့လူမထွက်ချင်သည့် အတွက်သူ့အားသူ၏၀ါ (၃၀) ကိုချွတ်ကာ ကိုရင်ပြန်ပေးဝတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘုန်းကြီးလည်း တဒင်္ဂံအချိန်အတွင်းလေးမှာ ကိလေသာ တဏှာ ကာမ အမှောင်အမှိုက်ထဲ ကျရောက်သွားလို့နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်လာခဲ့ရသော ၀ါ(၃၀) ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်ကို ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ရှေ့တသက်တာ ကို ကိုရင်ဘ၀ဖြင့် ပြန်စခဲ့ရပါတော့တယ်…
ကျွန်တော် ဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ ဟိုးအရင်က မြန်မာလူမျိုးများဟာ ကိုယ်လုပ်တာမှားရင်မှားတယ် မှန်ရင်မှန်တယ်ဝံခံရဲကြတယ်.. ဥပဒေကို လည်းလေးစားကြတယ်.. ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံကြတယ်.. ဥပဒေရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို လည်းကျေကျေနပ်နပ် ခံယူကြတယ်.. ဒါဟာကမ္ဘာမှာ မြန်မာပြည်ကြီးသားဆိုတာပြတာဘဲ၊
မှန်ချက်။ ။ သူကြီးမှ အောက်က..ဆူးမမစာ ပြန်ကူးပြီး ပြင်ပေးထားပါကြောင်း…။ ( နောက်စာများတွင် ..စပေ့ ခံရန်မမေ့ပါနှင့်၊ Category မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးရန်မမေ့ပါနှင့်)
Golden Hawk has written3post in this Website..
I am retire one ,now i have alot of time to study anythings,eg.social,religion and politic.
View all posts by goldenhawk →
မဆူး ပြင်ပေးတော့ အဆီအငေါ်တည့်သွားပါတယ်.. နို့မဟုတ်ရင် ဖတ်ရတာ နဲနဲထောက်နေသလိုပဲ…
ကျုပ်တို့တော့ goldenhawk ရေးသလောက် မရေးတတ်ပါဘူး…. ကြိုးစားနေဆဲပါ….
ခွင့်လွတ်ကြပါဗျာမရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ရေးကြည့်တာပါအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းသာရှိရင်ကော်ပီထည့်ပေးလိုက်ချင်ပါ့ဗျာ..ကျွန်တော့်ရဲ့ post ကိုဖတ်ရှုလို့လည်းအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကြိုက်လို့ ကူးယူလိုက်တယ်နော်။စိတ်မဆိုးကြေးပါ။
ဟီးဟီး…you’re all right..
ပြောလေ့ရှိတဲ့ သာသနာနဲ့ ဓမ္မတာဆိုတာကို ဒီပို့စ်နဲ့ စပ်ဆက်တွေးနိုင်ပါတယ်။ အရိယာအသိအမြင် ဒါမှမဟုတ် နဲနဲဈေးလျှော့ပေးရရင် ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ ဝိပဿနာညဏ်ရရင် သာသနာ၊ ကျန်အားလုံးကတော့ ဓမ္မတာတွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ အတိတ်ဘုန်းကံ၊ ပါရမီပါလာရင် ပါလာသလောက် ကြီးပွားမယ် တိုးတက်မယ် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မယ်၊ သို့ပေမဲ့ အချိန်တန်ရင် သံသရာထဲပြန်လည်၊ အကြောင်းကံမကောင်းရင် ပို့စ်ထဲကလို သိမ်းထားသမျှလေး ကုန်ရောပဲ။ ဝါနဲ့အရည်အချင်းဆိုတာလည်း ဒီသဘောပဲ။ ဓမ္မတာနယ်ထဲမှာသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပြုဖွယ်လိုက်နာဖွယ်တွေ အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီး အဆင့်အတန်းခွဲကြတယ်၊ သာသနာမှာတော့ သစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ အသိညဏ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ တဖက်ကလှည့်တွေးပြန်ရင်လည်း အသိညဏ်အစစ်ရပြီးသွားသူများအဖို့ ဓမ္မတာသတ်မှတ်ချက်တွေကို လိုက်နာပေးဖို့ ဝန်မလေးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဓမ္မတာသမားကြတော့ သာသနာဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူး။ ကျနော်ပြောတာကို သေသေချာချာ တွေးကြည့်နိုင်ရင် ဘာကိုမှ အံ့ဩထူးဆန်းဖို့မလို၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မရှိ၊ အကောင်း အဆိုးမရှိ၊ ပိုင်ရှင် ဒမြမရှိ၊ ရဲ လူဆိုးမရှိဆိုတဲ့ ကိလေသာ အာသဝေါကုန်ပြီးသူများ ပြောခဲ့တဲ့ ဓမ္မသဘောကို နဲနဲပို ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သူဖာသူ နာဗူးထပြိး.. မိန်းမကို စော်ကား..။
ပြီးတော့..ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်..ဆင်းတုတော်ကို ကန်တော့ပြီး.. ဘုရားသွားကြိုးချည်..။
ပြီးတော့.. စော်ကားထားတဲ့ မိန်းမကိုတာဝန်မယူပဲ.. ကိုရင်ပြန်ဝတ်တယ်လုပ်..ပြီး..ရှောင်ပြေး.။
အဲဒါကို..လက်ခံထားတဲ့..လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက… တော်တော်ပျက်စီးနေတာပဲလို့.. ပြောရမှာပဲ..။
စာသင်ကြားတာ.. ပရောဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်တဲ့.. ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကြားရေးစံနစ်အောက်မှာ.. စံနစ်တကျ..စောင့်ရှောက် ကွပ်ကဲမှုမရှိတဲ့.. သာသနာ့အရေခြုံလောကအောက်မှာ.. ကလေးငယ်တွေနဲ့.. မိန်းကလေးငယ်တွေ.. ဘ၀တွေ.. ဘယ်လောက်ပျက်နေသလည်း …တွေးမိကြဖူးသလား..သိချင်သား..။
မိမိလုပ်ရပ်အတွက် မိမိမှာတာဝန်အပြည့်အ၀ရှိတယ်ဆိုတာ သူမသိလို့ဖြစ်မှာပါ။
အဲ့လိုတော့ ပြောမရဘူးထင်တယ်နော်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးက သင်္ဂဇာဆရာတော်(ထင်တယ် ဆရာတော် မမှတ်မိလို့) ကို အရှင်ဘုရား နန်းတွင်းသူလေးတွေကို မြင်ရင် စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလားလို့ လျှောက်တော့ ဆရာတော်က ဒကာကြီး ထန်းပင်က ထန်းနို့ခြောက်ကို မြင်သလား တခါမှ ထန်းနို့ မညှစ်ဘူးတော့ ခြောက်နေပြီမို့ ဘယ်လိုညှစ်ညှစ် ထန်းရည် မထွက်သလို ဘုန်းကြီးတို့လည်း တခါဘူးမှ မတခါဘူးလို့ ထန်းနို့ခြောက်လိုပါပဲ လို့ ပြန်မိန့်သတဲ့။ ဖတ်ဖူးတာ သိပ်မမှတ်မိတော့လို့ သေချာသိသူများ ပြင်ပေးပါဦး။ ငယ်ဖြူဖြစ်ဖြစ် တောထွက်ဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်တော့ သိပ်မဆိုင်လောက်ဘူး။
That’s why I made comment in previous post
As for me, Not much excited for just seeing the naked Lady.
May be, I have already donealot of nastiest (sex) things in my life. “
စုံစုံ ပြောသလိုပါဘဲ။ ဒကာမကြီးက သဒ္ဒါလွန်တော့ တဏှာကျွံတာပေါ့။ တကယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အမျိုးသမီးတယောက်ထဲ မသွားသင့်ပါဘူး။ အဖော်ခေါ်သင့်ပါတယ်။ အခုခေတ်လည်း မိန်းကလေးငယ်ငယ်တွေ၊ ကြီးကြီးတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား အလုပ်ကူလုပ်ပေး။ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီး နေချင်သလိုနေ၊ ပြောချင်သလိုပြော။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ သာသနာကိုညစ်နွမ်းစေခြင်းအကြောင်းတွေ
မြန်မာပြည်မှာ လူ့ နလပိန်းတုံး တွေ ပိုများလာပြီပဲ ။
ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ကြ နားလည်ပေးလိုက်ကြပေါ့နော ။
ကာမ အမိုက်မှောင်မှာ မြောပါမိပါတယ် ဆိုတော့လည်း
ကိုယ့် နှမ မပါသေးခင် အချိန် အထိပေါ့……ဟီး ဟီး ။
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ် ။ သူများတွေမှ ယူနီဖောင်းပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေလဲ ယူနီဖောင်း ပြောင်းတယ်။ မိရင်တော့ခံကြတာပဲ။ မတွေ့ရင်တော့လဲ ဘယ်သူမှ မသိဘူးပေါ့နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ဖုန်းထဲက ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခု ပြတယ်။ သင်္ကန်းနဲ့ ထမီ (လုံချည်) နဲ့တော့ မရောထွေးသွားပါဘူး။ ၀တ်ထားကြလို့ပါ။ ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ အတိုင်းပဲလေ။ သူ့သားတော်တွေပဲ။ သြော် ကာမ အမိုက်မှောင်တဲ့။ ဘုရား…ဘုရား……။